Articles Archives - ISP-Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း ဖြစ်တန်ခြေသုံးရပ်နှင့် မဆင်းသက်အပ်တဲ့ အာဏာသိမ်းဝဲဩဃ
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ အကျပ်အတည်းဆိုက်နေပါပြီ။ အကျပ်အတည်းက ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဖြစ်တန်ခြေ တွေထဲမှာ အာဏာသိမ်းရေးဟာလည်း တပ်မတော်ဘက်ပြောဆိုနေတဲ့ ဖြစ်တန်ခြေတခု ဖြစ်နေပါတယ်။ Read more...
အယ်ဒီတာမှတ်ချက် – The Movement – မြန်မာ့အရွေ့ အဖွဲ့က ထုတ်ဝေသည့် ခေတ်စမ်း ဒစ်ဂျစ်တယ်စာစောင် အမှတ် – ၁ အတွက် ISP-Myanmar ၏ ပြင်ပဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေး ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်သူငြိမ်း ရေးသားသည့် အမှာစာကို Read more...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အစဉ်အလာ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ပြည်သူသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ထင်သာမြင်သာရှိရေး၊ တာဝန်ခံရေး၊ Read more...
ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲပေးခဲ့ကြပါပြီ။ Read more...
ဆုရတနာမြင့် နှင့် လင်းထက်အောင်
၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ပြုလုပ်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ရွေး ကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပုံသဏ္ဍာန်များမှာ ယခင် ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်နှင့်မတူ၊ Read more...
This article assesses media freedom under the NLD Government by analyzing the situation of legal Read more...
Comments on Myanmar’s COVID-19 Economic Relief Plan (CERP)
The Government of the Republic of the Union of Myanmar’s COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) is attached I have scanned and pasted sentences and phrases exactly as they appear in this Plan for ease of reference and have commented on them Read more...
ဝန်ကြီးချုပ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အရာချခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသန ပုစ္ဆာ
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့မှာ ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်ဟာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ စွပ်စွဲအပြစ်တင်လို့ အောင်မြင်သွားပါတယ်။ သမ္မတကသာ ဒီရလဒ်ကို အတည်ပြုရင် Read more...
COVID-19 Pandemic andaConflict-sensitive Response
Significantly, the Myanmar government adoptedapolicy of “leaving no one behind” in the fight against Read more...
From Unemployment to Post COVID-19 cultivation of human resources
Dr Zaw Oo
As the unemployment conditions in Myanmar have deteriorated, more than 100,000 workers in the formal sector have lost their Read more...